हार्नुको मज्जा- खेमराज पौडेल भर्सेस रवीन्द्र मिश्र ! « Gajureal
हार्नुको मज्जा- खेमराज पौडेल भर्सेस रवीन्द्र मिश्र !
प्रकाशित मिति: २० मंसिर २०७६, शुक्रबार ०९:२१
चुनावी परिणामको प्रसंगमा कास्कीका पराजित कांग्रेस उमेद्वार खेमराज पौडेलको भनाइ यसरी आयो, सुन्नेहरुको मनमा खुशी छायो । उनले भनेछन् – सम्झीदिनु एक निष्ठावान मान्छे चुनाव हारेर पनि हाँस्दै गयो, जुन प्रक्रियाका लागि अर्पित थियो मेरो जीवन । म इमान्दार रहेछु, कास्कीको प्रत्येक मत , अनि देश बिदेशका हरेकको मायाँ प्रति । राजनीति जितें, मत जितिनं तर मन जितें कि जस्तो लाग्छ । बिजयी नानीलाई हृदयले बधाई – राम्रो गर्नु ।’
त्यसैगरी परिणाममा आफ्नो पार्टी कमजोर रहेपछि, जमानत समेत जफत भएपछि साझा पार्टीका नेता रवीन्द्र मिश्रले मनको तितो पोखेछन्- ‘जनताले गल्ती गरे, भ्रष्टचारीलाई नै भोट भरे !’
बितेको बैंस, पाकेको केश भएका खेमराज बालाई बधाई छ । तपाईंको मनले जीवन र जगतलाई बुझेको रहेछ । चुनाव त जित्नु भएन तर हारको पीडालाई सामान्य बनाएर प्रशन्नता प्रकट गरेर दुनियाँलाई खुशी पार्नु भयो । उता साझा पार्टीका एकल नेताज्युको मल्हम बिनाको जलन सुन्दा भने टुप्पाबाट पलाउनुको अर्थले मेल खाएको अनुभूति भयो ।
हामीले उहिल्यै देखि बिभिन्न प्रसंगमा सुन्दै आएको यो भनाइ निकै अर्थपूर्ण छ । ‘टुप्पाबाट पलाएकाहरुको के कुरा गर्नु ?’ ‘टुप्पाबाट पलाएपछि यस्तै हुन्छ ! टुप्पाबाट पलाएकासंग कुरा मिल्दैन’ आदी ।
टुप्पाबाट पलाउनु भनेको बेमौसमी फल फल्नु ,आँतमा नभएको बल चल्नु हो । कर्म बिनाको आश लाग्नु, लोभले निम्त्याएको त्राश जाग्नु हो ।
मिश्र सर देश / विदेश खाई विशेष हुनु भएको मान्छे हुनुहुन्छ । वहाँलाई केही सोध्ने इच्छा जाग्यो, केहि सुझाव दिन मन लाग्यो । तपाईं अलि हतारिनु भएको त हैन ? एउटा बिरुवा पनि रोप्ने बित्तिकै कहाँ फल फल्छ र ! वर्तन नहाली बत्ति कहाँ बल्छ र ! आखिर गोडमेल, मलजल र संरक्षण पछिकोलामो पर्खाईबाट पो फल खान पाइन्छ त । हैन र ?
बर्सौंसम्म बारी बाँझो छाडेर परदेश धाउनु भो, ढिलै भए पनि फर्किएर आउनु भो । बालीनाली फलाउन खेताला लाउनु भो ! न तपाईंसंग बलिया हल नै छन् , न प्रशस्त औजार छन् ! न राम्ररी जोत्नु भएको छ बाँझो, न फुटेकोछ राम्ररी राँटो, न मलिलो भएकोछ त्यहाँको माटो ! न सघाउने आफ्ना भाई, न खेताला नै पाउनु भो स्थाई !
धन्न बारीको एक छेउबाट जोत्न पाउनु भयो, त्यसैमा मोहियानी लाउनु भयो ! तपाईं यसैमा रमाउनुस, इमान्दार भएर काम समाउनुस् ! बिस्तारै दाना लाग्न थाल्नेछन् बोटमा, मल्हम लाग्न सुरु हुनेछ पुरानो चोटमा ।
निर्वाचन आयो-ग भन्ने बित्तिकै जनताले कुन बोर आयो भन्न थालेका हुन् ?
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कामै गरेको छैन, मुख्यमन्त्रीको दिनगन्ती शुरू भइसक्योकामै नगरेपछि खाली हुन्छ, समय कटाउन
मन्त्री रेणुको ‘जिब्रो चिप्लिएको’ जसपाको प्रतिक्रिया, मुखमा ग्राभेल हाल्न दिल्ली जाँदै, सुपरग्लुले पनि काम चलाउन नेपाली डाक्टरको सुझाव !
मानव दिमागमा ‘चिप’ लगाउने तयारीमा अर्बपति एलन मस्कविश्व नेताहरुमा खुसीको लहर, गोबर फाल्न शुरु !
माहुरीले नै नक्कली मह बनाएको व्यवसायीको आरोप, चाका जफत, रानी माहुरी फरार !
‘विद्यार्थीसँग बढी शुल्क लिइएको पाइए कारबाही हुन्छ’ : गृहमन्त्रीत्यही कारबाही हुने भएर त विद्यार्थीले सजाय
कृषि विकास बैंकले ५५औं वार्षिक उत्सवको उपलक्षमा प्रश्तुत छ नाटक-“दुरुपयोग”… (पर्दा खुल्छ)छोरा :- ‘बा मैंले
१ नं. चाहिँ सबैभन्दा ढिला, किन हाेला !